Xildhibaannada labada Gole ee taageersan Axmed Madoobe oo eedeyn u jeediyey Wakiilada Beesha Caalamka. [Akhriso] -News and information about Somalia
Home News Xildhibaannada labada Gole ee taageersan Axmed Madoobe oo eedeyn u jeediyey Wakiilada...
Xildhibaannada labada Gole ee taageersan Axmed Madoobe oo eedeyn u jeediyey Wakiilada Beesha Caalamka. [Akhriso]
Xildhibaannada labada Gole ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo magaalada Kismaayo u tegay taageeradda madaxweynahaa Juballand ee ololah ugu jira in markii saddexaad xilka kusoo noqdo Axmed Maxamed Islaam ayaa soo saaray Warsaxaafadeed.
War-saxaafadeedka ayaa looga hadlay Doorashada Jubbalanad ee Garabka Axmed Madoobe, waxaana si weyn loogu eedeeyay wakiilada Beesha Caalamka inay hal dhinac oo kaliya culeys saareen, isla markaana aysan dhexdhexaad ka ahayn Doorashada Jubbaland.
Xildhibaannadan oo qaab xisbi u abaabulan ayaa tiradoodu ku dhowdahay 20 xildhibaan oo labada aqal ka tirsan, waxayna isugu jiraan qaar hore ugu sugnaa Kismaayo iyo kuwo kale oo dib ugu biiray. waxayna goobjoog ka ahaayeen doorashadii Guddoonka Baarlmanka Jubbaland ee Garabka Axmed Madoobe oo dib loogu doortay dhammaan gudoonkii hore ee Baarlamaankii hore.
Previous articleSAWIRRO: Madaxa Xukuumadda Galmudug Oo Qaabiley Cabdiraxmaan C/Shakuur
Next articleXOG: Kheyre oo ka carooday Fadeexad cusub oo ku soo baxday Xukuumaddiisa & amar deg deg uu bixiyay
Nin Dil Ka Geystay Qardho Oo Laga Soo Qabtay Yemen
DHAGEYSO: Farmaajo Oo Wajahaya Caqabadii Ugu Weyneyd Tan & Doorashadiisii